FTTX Access စနစ်
Optical Transmitter နှင့် အသံချဲ့စက်
Optic Fiber စမ်းသပ်ကိရိယာ
Fiber Fusion Splicer နှင့် ကိရိယာများ
Aerial Fiber Optic Cable ၊
မြေအောက် Fiber Optic Cable
FTTH တပ်ဆင်မှု ကိရိယာများ
Passive Optical စက်ပစ္စည်း
RS232/V35/Ethernet သို့ E1 ပြောင်းစက်များ
IP ကျော် E1 TDM
စီမံနိုင်သော E1 Ethernet Converter
E1 ထက် FXS FXO အိုးများ
RS232 E1 ဖိုက်ဘာမုဒ်
Fiber multiplexer ကျော် G.703 E1
Fiber Multiplexer မှ nxE1+Ethernet
CWDM MUX စနစ်
မြန်ဆန်သော Ethernet Switch ကို စီမံခန့်ခွဲသည်။
POE Ethernet ခလုတ်
စမတ်ကျကျ စီမံထားသော အီသာနက် ခလုတ်
SDH Multiplexer စနစ်
SDH converter မှ အီသာနက်
10G XFP SFP+ ဖိုက်ဘာ မော်ဂျူး
ဒစ်ဂျစ်တယ် တီဗီ ဂီယာစနစ်
2Ports 100M POE အီသာနက်ဖိုက်ဘာမီဒီယာပြောင်းစက်
10/100M ethernet fiber media converter,dual fiber,SC connector,20km,power AC 220V or DC 48V.
LFP မီဒီယာ converter၊ 10/100Base-T၊ dual fiber၊ SC ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၊ 20km၊ ပါဝါ AC 220V သို့မဟုတ် DC-48V
SFP မီဒီယာပြောင်းစက်၊ 10/100M အီသာနက်၊ SFP အပေါက်တစ်ခု၊ 20km-120km၊ AC 220V သို့မဟုတ် DC-48V
မြန်ဆန်သော Ethernet WDM Media Converter
WDM အီသာနက်မီဒီယာပြောင်းစက်၊ ဖိုင်ဘာတစ်ခုတည်း၊ 20km-120km၊ SC ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၊ AC 220V သို့မဟုတ် DC48V
4 ports 100M အီသာနက် VLAN Media Converter
5 Port Ethernet Switch with one-key port isolation
အကြံပြုချက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏စာပို့စာရင်းတွင် စာရင်းသွင်းပါ။
မူပိုင်ခွင့် 2017©Baudcom All Rights Reserved. whatsapp: +8617317919235